Lynda ANDRIATSITONTA fanondranana antsokosoko, radiata	0 Commentaire mai 1, 2018
Araka ny fanadihadiana nivoaka tamin’ny gazety boky Trandraka, laharana faharoa, mitovy amin’ny vidin’ny fiara tsy mataho-dalana iray ny sokatra « radiata » raha ahondrana any ivelany. Tsy misy afa-tsy eto Madagasikara io karazana sokatra mitondra ny anarana siantifika « Astrochelys » io. Vao tamin’ny herinandro lasa teo, nahatratra sokatra 10 196 nihidy tao anatin’ny efitrano iray tao Betsinjake Toliara ny tambazotra miady amin’ny fiarovana ny zava-boahary tandindomin-doza amin’ny faritra Atsimo-Andrefana. Ho an’ny taona 2018, nifanesisesy indray ny fahatrarana sokatra saika ho entina any ivelany teny amin’ny seranam-piaramanidina nanomboka ny volana febroary no mankaty.
Tafiditra ao anatin’ny lisitr’ireo biby tandindomin-doza sy hatahorana ho lany tamingana (UICN) ity sokatra “radiata”. Tsy misakana ireo mpanao varo-maizina anefa izany. Ny firenena aziatika no tena mpila azy ary atao sakafo na namana ao an-trano no tena ilaina azy. Ireo tomponandraikitra mifandray mivantana amin’ireo mpamatsy ny sokatra any ivelany no tena mahazo tombontsoa lehibe satria 2000 ka hatramin’ny 10.000 dolara ny vidiny iray. Tsy vao izao no nisy ny fanondranana antsokosoko ity karazana sokatra fa efa hatramin’ny vanim-potoanan’ny repoblika faharoa. Raha betsaka ny mpila azy any ivelany, nahoana no tsy atao amin’ny ara-dalana ny fanondranana azy?
‹ 4 G D’ORANGE : La solution numérique dans les activités professionnelles	› LA LIBERTÉ DE PRESSE : La fille du Xavier Ranaivo rapporte les bons conseils